FITSARANA AO FENOARIVO-ATSINANANA : Mametraka fomba fiasana iadiana amin’ny mpanera
Ny talata 13 aogistra lasa teo no nandeha voalohany tao amin’ny Radio RNM Fenoarivo-Atsinanana ilay fandaharana « Lalàgna Velogono ». 19 août 2019
Fandaharana teraka vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Fitaleavam-pparitry ny Serasera sy Kolontsaina Analanjirofo ary ny Fitsarana ambaratonga voalohany Fenoarivo-Atsinanana. Fandaharana iresahana momba ny lalàna sy ny tontolon’ny fitsarana.
Nadritra izany no nanazavam’ny filohan’ny Fitsarana Fenoarivo-Atsinanana, Bernako Minerva, ireo fomba fiasa efa napetraka mba hahatonga ny fitsarana ao an-toerana ho lavitry ny mpijirika na ny mpanera.
Efa misoratra eo anoloan’ny biraon’ny Fitsarana ny saran’ireo fikaranarana taratasy ho an’izay tsy maintsy misy sarany.
Nomarihiny fa ho an’ireo mponina avy amin’ny distrika efatra iandraiketan’ny fitsarana Fenoarivo-Atsinanana, dia efa tsy mila miakatra any Toamaisna intsony raha mikarakara « casier judiciaire ». Izay asa rehetra ataon’ny Fitsarana ambaratonga voalohany, dia efa ataon’ny Fitsarana ambaratonga volohany ao Fenoarivo-Atsinanana.
Noantitranterin’ny filohan’ny fitsarana ao an-toerana fa fitsarana manatona vahoaka no fanamby, ka misokatra midanadana ho an’ireo izay manam-panontaniana sy mila fangataham-panazavana ny varavaran’ny Fitsarana ambaratonga voalohany Fenoarivo-Atsinanana.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68235) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (402) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (177) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (92) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (81) 21 février 2020